Aas-aasayaasha tartanka European Super League oo xiriirrada FIFA iyo UEFA ka dacweeyay Maxkamadda Cadaaladda ee Midowga Yurub – Gool FM
Aas-aasayaasha tartanka European Super League oo xiriirrada FIFA iyo UEFA ka dacweeyay Maxkamadda Cadaaladda ee Midowga Yurub
Ahmed Nur May 31, 2021
(Yurub) 31 Maajo 2021. Maxkamadda ugu sarreysa qaaradda Yurub ee EU Court of Justice (Maxkamadda Cadaaladda ee Midowga Yurub) ayaa sheegtay inay aas-aasayaasha mashruuca European Super League ku eedeeyeen xiriirradda UEFA iyo FIFA inay qalad ka galayaan xeerarka tartammada ee qaaradda Yurub.
Warar dhowaan soo baxay ayaa sheegaya in aas-aasayaasha mashruuca tartanka European Super League ay dacwad ka geeyeen xiriirrada UEFA iyo FIFA maxkamadda EU Court of Justice.
Qolada iska leh aas-aaska European Super League ayaa ku doodaya in xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub uu ku xad gudbay xeerka tartammada Yurub maadaama uu ku cago jugleeyay inuu kooxaha tartankan aas-aasay ku ciqaabi doono go’aankii ay ku bilaabeen tartan heer naadi ah oo barbar socda tartammada kooxaha ee uu maamulo xiriirka UEFA.
Madaxweynayaasha kooxaha Real Madrid (Folerinto Perez) iyo Barcelona (Joan Laporta) ayaa ku doodaya inay xaq u leeyihiin inay bilaabi karaan tartan ka madax bannaan UEFA sidoo kalena xeerka anshaxa ee xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub uusan u diideyn inay talaabadan oo kale qaadaan.
Labadan naadi ee ka dhisan Spain iyo naadiga Taliyaaniga ah ee Juventus ayaa wali ku jira mashruuca European Super League oo markii ay hore saxiixeen 12 koox, hase ahaatee, kooxihii kale oo idil ayaa isaga baxay Super League.
Lama oga halka ay ku dambeyn doonto dacwada aas-aaska tartanka European Super League, balse aas-aasayaasha tartanka iyo xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa la fahansan yahay inay isla gaari doonaan maxkammadaha ugu sarreeya ee kubadda cagta ama qaaradda Yurub.
Olivier Giroud oo heshiis la gaaray koox ka dhisan Taliyaaniga
Waa kuwee xiddigaha ay doonayso inay iska iibiso Manchester City si ay gacanta ugu soo dhigto Kane & Grealish?